Kushner ayaa la kulmay Mohammed bin Salman si uu uga dhaadhiciyo caadi ka dhigista… – Hagaag.com
Kushner ayaa la kulmay Mohammed bin Salman si uu uga dhaadhiciyo caadi ka dhigista…
Posted on 2 Seteembar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Dhaxal Sugaha Boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman ayaa shalay la kulmay Jared Kushner, oo ah lataliye sare ee Madaxweynaha Mareykanka, oo bilaabay socdaal uu ku marayo dalal badan oo ka tirsan Khaliijka kadib markii Imaaraatka iyo Israel ay ku dhawaaqeen inay si caadi ah u soo celinayaan xiriirkooda kadib dhex dhexaadintii Mareykanka.
Safarka Kushner ayaa yimid kadib markii Xoghayaha Arrimaha Dibada Mareykanka Mike Pompeo uu safar ku tagay Sudan iyo qaar ka mid ah wadamada Khaliijka si looga dhaadhiciyo dalalka kale ee Carabta inay caadi ka dhigaan xiriirkooda Tel Aviv.
Wakaaladda wararka ee Sacuudi Carabiya ayaa soo warisay in Mohammed bin Salman iyo Kushner “ay ka wada hadleen rajada laga qabo geedi socodka nabadda ee gobolka iyo baahida loo qabo in dib loo bilaabo wadahadaladii u dhaxeeyay dhinacyada Falastiin iyo Israel, si loo helo nabad cadaalad ah oo waarta.”
Labada dhinac ayaa sidoo kale ka wada hadlay iskaashiga labada dal iyo xoojinta dhinacyada oo dhan, si loo helo nabadgelyo iyo xasilloonida gobolka. Lama faahfaahin kulanka labada nin ee ku saabsan dadaalka Washington ee ah in la hagaajiyo xiriirka Riyadh iyo Tel Aviv, inkasta oo Kushner uu horey u sheegay in caadi ka dhigista xiriirka Boqortooyada iyo Israel ay tahay “mid lama huraan ah oo waqti un ka xiga”.
Wasiirka arrimaha dibedda ee Sucuudiga Amiir Faysal bin Farxaan ayaa isna ku dhawaaqay bishii August 18-dii in dalkiisu aanu raaci doonin jidka ay martay Imaaraatka ee hagaajinta xiriirka ay la leeyihiin Israel, ilaa iyo inta uu taagan yahay khilaafka Falastiiniyiinta iyo Israel, isaga oo carabka ku adkeeyay sida ay Riyadh uga go’an tahay hindisahii nabadeed ee Carbeed ee la soo jeediyay 2002, kuna salaysnaa Mabda’a ahaa dhul lagu bedesho Nabad.
Kahor imaatinkiisa Sacuudi Carabiya, Kushner wuxuu Manama kula kulmay Boqorka Baxrayn, Sheikh Hamad bin Isa, inta kulankoodu socday wuxuu boqorka uga mahadceliyey maamulka Mareykanka tallaabada ay qaadeen oo uu ku tilmaamay dadaallada joogtada ah ee lagu doonayo in nabad iyo xasillooni looga dhaliyo Bariga Dhexe.
Sheikh Hamad ayaa sidoo kale amaanay mowqifka Imaaraatka carabta iyo dadaalkeeda ku aadan sidii loo gaari lahaa wax uu ku tilmaamay xal cadaalad ah oo damaanad qaadaya in shacabka Falastiin ay helaan xuquuqdooda sharciga ah isla markaana gobolka helo ​​nabad, sida uu hadalka u dhigay. Boqorka Baxrayn wuxuu sidoo kale tixgeliyey in xasilloonida iyo wadajirka khaliijka ee gobolka ay ku xiran tahay Boqortooyada Sacuudi Carabiya.